गलत समूहको रगत चढाइएकी बालिकाको मृत्यु- समाचार - कान्तिपुर समाचार
गलत समूहको रगत चढाइएकी बालिकाको मृत्यु
वैशाख २३, २०७६ फातिमा बानु
काठमाडौँ — बाँसबारीस्थित सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रमा गलत समूहको रगत चढाउँदा गम्भीर भएकी बालिकाको गएराति मृत्यु भएको छ । सर्लाहीकी ५ वर्षीया बालिका आकृतिकुमारी साहको शल्यक्रिया क्रममा अर्कै समूहको रगत चढाएपछि स्वास्थ्य गम्भीर थियो ।
शल्यक्रियामा डा. नवीनचन्द्र गौतमले बालिकाको मृत्यु भएको पुष्टि गर्दै के कारणले मृत्यु भएको हो अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए । उनले भने, 'बालिकाको ज्यान गयो । हामी दुःखी छौं । के-कसरी यस्तो भयो छानविन हुन्छ ।'
मृतक बालिकाका आफन्त भने अस्पतालको लापरबाहीले ज्यान गएको भन्दै आक्रोशित बनेका छन् । अस्पतालले सम्बनधित चिकित्सकलाई कारबाही र बालिकाको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति नदिएसम्म शव नउठाउने पक्षमा छन् । बालिकाको शव अहिले गंगालाल अस्पतालमै छ ।
मृतकका आफन्तले गंगालाल परिसरमा आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
यस्तो भएको थियो
मेडिकल रिपोर्टमा बालिकाको रक्तसमूह 'ओ' पोजिटिभ छ । रगत चढाइएको रिपोर्टमा भने 'ए' पोजिटिभ लेखिएको छ । मुटुमा समस्या भएपछि वैशाख १३ गते उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । १७ गते उनको शल्यक्रिया गरिएको थियो ।
अवस्था गम्भीर भएपछि अस्पतालले बिरामीलाई भेट्न नदिएको आफन्तको गुनासो छ । गलत रगत चढाइएकोबारे खोजीनिती गर्न थालेपछि बिरामी पक्ष र अस्पताल प्रशासनसबीच विवाद भइरहेको छ । अस्पतालले बालिकाको रगत समूह 'ए' पोजिटिभ नै थियो भन्ने जबर्जस्ती पुष्टि गर्नका लागि रगतसम्बन्धी तीनवटा रिपोर्टमा केरकार गरी आफैंले लेखेको 'ओ' पोजिटिभको ठाउँमा 'ए' पोजिटिभ बनाएको भेटिएको छ ।
बालिकालाई शल्यक्रियामा लगिनुअघि बिरामीका आफन्तसँग लिइएको सहमतिमा डा. ज्योतिन्द्र शर्मा, डा.रवीन्द्रभक्त तिम्ले र डा. नवीनचन्द्र गौतमले शल्यक्रिया गर्ने उल्लेख छ । अस्पतालका निर्देशक समेत रहेका डा. शर्माले भने शल्यक्रियामा आफू संलग्न नभएको बताए ।
'यो घटनाबारे मलाई धेरै थाहा छैन, अस्पतालमा छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गराउनेछु,' उनले भने, 'अनुसन्धानपछि जसबाट गल्ती भएको छ, उसलाई कारबाही गरिनेछ । बच्चाको शल्यक्रिया नै जटिल थियो । ओपन हर्ट सर्जरी जटिल नै हुन्छ ।।'
प्रकाशित : वैशाख २३, २०७६ १०:५४
गलत रगतले बालिका गम्भीर
काठमाडौँ — बाँसबारीस्थित सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रमा गलत समूहको रगत चढाउँदा एक बालिकाको अवस्था गम्भीर भएको छ । सर्लाहीकी ५ वर्षीया बालिका आकृतिकुमारी साहको शल्यक्रिया क्रममा अर्कै समूहको रगत चढाइएको हो ।
अवस्था गम्भीर भएपछि अस्पतालले बिरामीलाई भेट्न नदिएको आफन्तको गुनासो छ । गलत रगत चढाइएकोबारे खोजीनिती गर्न थालेपछि बिरामी पक्ष र अस्पताल प्रशासनसबीच विवाद भइरहेको छ । अस्पतालले बालिकाको रगत समूह 'ए' पोजिटिभ नै थियो भन्ने जबर्जस्ती पुष्टि गर्नका लागि रगतसम्बन्धी तीनवटा रिपोर्टमा केरकार गरी आफंैले लेखेको 'ओ' पोजिटिभको ठाउँमा 'ए' पोजिटिभ बनाएको भेटिएको छ ।
'यो घटनाबारे मलाई धेरै थाहा छैन, अस्पतालमा छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गराउनेछु,' उनले भने, 'अनुसन्धानपछि जसबाट गल्ती भएको छ, उसलाई कारबाही गरिनेछ । बच्चाको शल्यक्रिया नै जटिल थियो । ओपन हर्ट सर्जरी जटिल नै हुन्छ । हामीले बचाउने कोसिस गरिरहेका छौं ।' उनका अनुसार बालिकाकोअहिले आईसीयूमा राखेर उपचार भइरहेको छ ।
अस्पतालले बालिकाको अवस्था बुझ्न नसघाएको भन्दै आफन्त भने घरि प्रहरी कार्यालय पुग्ने घरि मानव अधिकार आयोग धाउने गरिरहेका छन् ।
'अपरेसन गर्दागर्दै बच्चालाई जसरी पनि फ्रेस रगत चाहियो भनेर डाक्टर निस्किए । ए पोजिटिभ ग्रुपको जो छ, रगत दिइहाल्नुस् भनेपछि हामी यही ग्रुपका साथी खोजेर रगत दिन लगायौं,' बालिकाका बुबा रामप्रवेश साहले भने, 'पढेको छैन, छोरीको रगत समूहबारे राम्ररी बुझेको थिइन । राम्ररी नेपाली बोल्न पनि आउँदैन । डाक्टरले जुन रगत मगाउनुभयो, मैले त्यही जुटाएँ ।'
शल्यक्रिया गर्नुअघि बेहोस गराउँदाको (एनेस्थेसिया) रिपोर्टमा पनि बालिकाको रक्तसमूह 'ओ' पोजिटिभ नै उल्लेख छ । अस्पतालको प्रयोगशालमा लिइएको रिपोर्टमा पनि उही रक्तसमूह टिपिएको छ । 'यति धेरै रेर्कड हुँदाहुँदै पनि बच्चालाई गलत रगत चढाइदिए, यो सरासर लापरबाही हो,' आफन्त सुरेन्द्र साहले भने, 'बच्चाको अवस्थाबारे पनि हामीलाई केही भनेका छैनन् ।'
रगतरोग विशेषज्ञ डा.अमित श्रेष्ठका अनुसार शरीरमा नमिल्ने समूहको रगत हाल्दा बिरामीको ज्यान जोखिममा पर्न सक्छ । 'शरीरमा संक्रमण हुन्छ, मिर्गौला फेल हुने सम्भावना उच्च हुन्छ,' उनले भने, 'सक्दो छिटो व्यवस्थापन गर्न सके मात्र बिरामीको ज्यान जोगाउन सकिन्छ ।'
शल्यक्रिया गर्नुअघिको प्रयोगशाला रिपोर्टअनुसार बालिकाको रगतमा 'प्लेटलेट्स' को मात्रा ३ लाख १ हजार ३३ सय छ । 'प्लेटलेट्स' मानिसको शरीरमा रगतसँगै बग्ने कोषिका हुन् । रगतमा यस्ता कोषिकाको मात्रा ५ लाखभन्दा माथि भएमा जटिल मानिन्छ ।
शल्यक्रियापछि बालिकाको रगतमा 'प्लेटलेट्स'को मात्रा बढेर ७ लाख पुगेको छ । रक्तरोग विशेषज्ञ सुधीर सापकोटाका अनुसार रगतमा 'प्लेटलेट्स'को मात्रा ६ लाखभन्दा बढी भए रगत जम्ने, रगतका नली बन्द हुने सस्मया देखिन्छ । उनी भन्छन्, 'हृदयाघात भएर बिरामीको मृत्यु पनि हुन सक्ने जोखिम हुन्छ ।'
शल्यक्रिया गर्नुअघि बालिकाको मिर्गौला परीक्षणको रिपोर्ट सामान्य छ । रिपोर्टअनुसार बालिकाको मिर्गाैलामा 'क्रेटिनिन' लेभल ० दशमलब ३ छ ।
मिर्गौलारोग विशेषज्ञ डा. ऋषिकुमार काफ्लेका अनुसार 'क्रेटिनिन' लेभल १ दशमलब ४ भन्दा माथि गएमा मिर्गौलाले काम गर्न छाड्छ । शल्यक्रियापछिको बालिकाको मिर्गौला परीक्षण रिपोर्टमा 'क्रेटिनिन' लेभल ४ दशमलब २ छ । डा.काफ्ले भन्छन्, 'रगत चढाउँदा या मुटुजस्ता मुख्य अगंको शल्यक्रिया गर्दा अस्थायी रूपमा पनि मिर्गौला फेल हुनसक्छ, मिर्गाैलाले फेरि काम गर्ने सक्ने पनि हुन्छ ।'
प्रकाशित : वैशाख २३, २०७६ ०८:१३
मन्त्रीलाई कालोझन्डा देखाउँदा झडप
शान्ति प्रक्रियालाई गलत बुझेँ भन्ने विप्लवलाई लाग्दै छ : दाहाल
संसद्‌मा ‘गलबन्दी च्यातियो ...’ गीतको चर्चा
राष्ट्रिय सभाबाट गुठी विधेयक फिर्ता
चन्द समूहका ४ कार्यकर्ता पक्राउ
सिटौला पक्षले मनोनीतबाट पार्टी संरचना गठन नगर्न दियो चेतावनी